Fampiasam-bola ho an'ny fizahan-tany amin'ny fampiroboroboana an'i Zhanjiang, Sina
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao » Fampiasam-bola ho an'ny fizahan-tany amin'ny fampiroboroboana an'i Zhanjiang, Sina
Aogositra 22, 2013
Zhanjiang dia mandray ny famatsiam-bola fizahan-tany avy any Hong Kong ao anatin'ny indostrian'ny fizahan-tany mahomby, izay antenaina hivoatra amin'ny taona 2016 aorian'ny fanatsarana ny fitaovam-pitaterana ao an-tanàna, tanàna ambony iray
Zhanjiang dia mandray ny famatsiam-bola fizahan-tany avy any Hong Kong ao anatin'ny indostrian'ny fizahan-tany mahomby, izay antenaina hipoaka amin'ny 2016 aorian'ny fanatsarana ny fitaovam-pitaterana ao an-tanàna, hoy ny tompon'andraikitra ambony ao amin'ny tanàna.
"Ny seranan-tsambo any andrefan'ny faritanin'i Guangdong dia omena loharanon-karena an-dranomasina, ara-tontolo iainana, ara-tantara ary ara-kolontsaina, ny toetrandro sy ny asa," hoy i Zhuang Xiaodong, lefitra lefitra, namintina ny tombony azon'i Zhanjiang amin'ny fampandrosoana fizahan-tany.
Manitatra 2,023.6 kilometatra ny morontsirak'ilay tanàna, ary itoeran'ny nosy 122 tsy misy mponina, manome fijery an-dranomasina malalaka sy milamina ny mpizahatany.
Ny Saikinosin'i Leizhou, iray amin'ireo peninsula telo lehibe indrindra ao amin'ny firenena, dia mitovy amin'ny sary hosodoko tanimboly volamena sy ranomasina misy fary maitso.
Ny kolontsaina Mazu dia mifangaro amin'ny kolontsaina Gaozhou ao Zhanjiang, ary manolotra fisarihana kolontsaina miavaka izy roa, toy ny alika vato voasokitra sy dihy dragona.
Ny fizahantany andrasana dia manararaotra fampiasam-bola
Mipetraka atsimon'ny Tropic of Capricorn ny tanàna, mankafy ny toetrandro mafana sy ny hazavan'ny masoandro, ny fototra ilainy mba hahatongavana any amin'ny fizahan-tany ho an'ny fialan-tsasatry ny ririnina.
“Betsaka ny olona any avaratra atsinanan'i Sina sy Russia no handositra ny ririnina any Hainan amin'ny fialantsasatra. Ireto olona ireto koa dia mety ho mpanjifantsika, "hoy i Zhuang.
"Zhanjiang dia tsy nosy fotsiny ary afaka manolotra fialam-boly maro karazana ho an'ny mpizahatany noho ny azon'i Hainan."
Miaraka amin'ny mponina efa ho 8 tapitrisa, manana loharanon-karena ampy ny tanàna hampivelatra ny indostrian'ny fizahan-tany miasa mafy, hoy i Zhuang.
Na eo aza ny loharanom-bolan'ny fizahan-tany manan-karena dia mbola mahasarika mpitsidika vitsivitsy ihany i Zhanjiang, indrindra ny avy any ampitan-dranomasina.
90,000 13.1 ny mpizahatany any ivelany izay nitsidika an'i Zhanjiang tamin'ny taon-dasa, raha 146 tapitrisa kosa ny mpizahatany tonga tamin'ny ankapobeny. Ny tahan'ny mpizahatany sinoa amin'ny vahiny dia 1-to-30 ao Zhanjiang fa eo ho eo amin'ny 1 ka hatramin'ny XNUMX ny ankamaroan'ny tanàna mpizahatany lehibe ao an-tanàna.
“Ny fitaterana no tena olana. Mpitondra amin'ny fitaterana entana izahay noho ny seranan-tsambo sy ny lalamby, saingy mihemotra izahay amin'ny resaka fivezivezena mpandeha, ”hoy i Zhuang.
“Tsy manana lalamby haingam-pandeha haingam-pandeha izahay, ary tsy manana lalan-drivotra iraisampirenena marobe.”
Tamin'ny volana jolay, Hu Chunhua, sefon'ny antoko ao amin'ny faritanin'i Guangdong, dia nanambara tamin'ny valan-dresaka fa ny governemanta faritany dia hametraka 672 miliara yuan (110 miliara dolara) amin'ny fananganana ireo faritra tandrefana, atsinanana ary avaratry ny faritra mbola tsy mandroso, manome fotoana volamena ho an'ny tanàna.
"Ny faritra andrefana, miaraka amin'i Zhanjiang ho tanàna lehibe, dia hifantoka amin'ny fanatsarana ny fotodrafitrasa fitaterana," hoy i Zhuang.
Ny lalamby haingam-pandeha mampitohy ireo tanàna any andrefan'i Guangdong miaraka amin'ny Delta Renirano dia hovitaina ary hampiasaina amin'ny 2016.
Ny dia avy any Zhanjiang mankany Guangzhou na Shenzhen dia hafoina avy amin'ny fiaran'ny fiara adiny dimy farafahakeliny ho roa ora amin'ny lamasinina. Ny manampahaizana manokana dia mihevitra ny famindran-toerana ny seranam-piaramanidin'i Zhanjiang hanitatra ny fahaizany, manamboatra ny lalana hametrahana lalambe iraisam-pirenena bebe kokoa.